Summerfọdụ oge okpomọkụ na-aga njem na Uruguay | Akụkọ Njem
Summerfọdụ oge okpomọkụ na-aga Uruguay
Mariela Carril | | Osimiri, Uruguay
Uruguay ọ bụ obere mba dị na Ndịda Amerịka. Ndị dike abụọ gbara ya gburugburu, Brazil na Argentina, ọ bụ ezie na ọ pere mpe ma oge ọkọchị rute, ọtụtụ ndị agbata obi ya gafere ala iji nwee anụrị nnukwu osimiri.
Uruguay nwere oke osimiri na Río de la Plata, Osimiri Uruguay na South Atlantic. Ala gbara osimiri okirikiri nke Río de la Plata mara ezigbo mma mana oke osimiri kachasị mma bụ oke osimiri ma ọ bụrụ na ị na-eche njem ị gafere ala ndị a, chee echiche banyere Uruguay na ebe ezumike ya.
4 Ekwensu kwuru
Ọ dị mma spa kachasị elu na South America Ọfọn, n'etiti Jenụwarị na February ndị njem nleta si n'akụkụ ụwa niile. Agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu bụ ndị bara ọgaranya sitere na Brazil na Argentina bụ ndị nwere ụlọ obibi oge ọkọchị ha na gburugburu obodo ahụ, enwere ụfọdụ ndị ama ama na mba n'oge.
Ọ dị na peninshula, oke ala nke kewara mmiri agba aja nke Río de la Plata na mmiri oke osimiri ma ọ bụ ezie na mmadụ bi na ya kwụsiri ike site na gburugburu 13 puku mmadụ, n'oge ọkọchị, ọnụ ọgụgụ ahụ bilitere karịa 40 puku. Ntughari site na nhazi gaa na Biarritz nke ụdị spa bidoro nwayọ na narị afọ nke 80 wee gbawa, n'ihe gbasara mmepe obodo, na 'XNUMXs.
Okporo ụzọ, ụzọ iji hụ ma hụ, bụ Gorlero avenue. Ahịa mba dị iche iche dị ma ọ bụrụ na ị ga-apụ, abalị na-amalite ebe a. Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, Ogwe, a cha cha, na a mara ọrụaka ngosi. Obodo o nwere ọdụ ụgbọ mmiri nke ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri na-eleta ma o nwere ọdụ ụgbọ elu, Laguna del Sauce International Airport, ihe dị ka kilomita iri abụọ site na etiti.
Ọ bụrụ n ’ịnọ na Brazil, ị nwekwara ike ibata n’ ala, ọ bụrụ n ’ịnọ na Buenos Aires na ị chọrọ ịga leta, ị nwere ike ịgafe ụgbọelu ma ọ bụ jiri ụgbọ mmiri gafee, n’agbanyeghi na ị ga-agbakwunye njem ụgbọ ala. May nwere ike ịnọ na-eche ihe ị ga-anụrịrị ma e wezụga a obodo dị oke ọnụ ebe obula i lere ya anya, ebe ihe nile nwere onu ahia mba ofesi, site na Coca-Cola ka ịgbazite nche anwụ.
Nakwa, A maara Punta del Este maka osimiri mara mma. E nwere mmadụ abụọ ewu ewu, Osimiri Mansa na Brava Beach. Mansa na Brava maka nsogbu mmiri ya. Ndị enyi, ezinụlọ, ha niile na-ezukọta na osimiri abụọ ahụ site n'ụtụtụ ruo abalị. Ha nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ iri nri na ihe niile, mana ọ bụrụ na ị na-achọ nzuzo ma ọ bụ obere mkpọtụ ma ọ bụ obere ngosi ị nwere ike ị pụọ ihe dị ka kilomita 30 wee kwụsị Jose Ignacio.
Ọ bụghị na José Ignacio bụ ihe efu ma ọ dị jụụ karịa osimiri abụọ ndị ọzọ. Bụkwa Playa Montoya, Manantiales ma ọ bụ Laguna de José Ignacio nke bụ mmiri dị mma. Na ụsọ oké osimiri nke Punta del Este e nwere agwaetiti abụọ, Agwa nke Lobos, ya ọtụtụ ógbè nke ọdụm oké osimiri, na Agwaetiti Gorriti, pere mpe n'agbanyeghị osimiri abụọ mara mma. Ọ bụrụ n’inwee obere ụgbọ mmiri, ọ ga-adị mma ileta.
Ọ bụ spa na Ọ dị narị kilomita abụọ na iri atọ site n’isi obodo Uruguayan, Montevideo, na kilomita itoolu site na La Paloma. O nwere obodo ochie nke nwere ulo kariri otu nari aro na ulo akwukwo mara mma nke di n’akuku osimiri abuo. Barco Beach na El Desplayado. Nke mbụ bụ maka ezinụlọ na nke abụọ bụ maka ndị na-eto eto na-achọ izute ndị na-eto eto.
Emechiri okporo ụzọ dị n'okporo ụzọ n'abalị ma kee ihe ngosi nka nke ndị na-ese ihe n'okporo ámá na-akọghị. Na-esote ya dị ụlọ tii, ụlọ nri na ụlọ mmanya. Ọ bụrụ na ị na-aga na elu oge, site na December na March, ị ga-enwe a n'oge okpomọkụ na zuru oke n'etiti udo na oru. Offerlọ oriri na ọ offerụ hotelụ dị iche iche dị iche iche, enwere ụlọ mgbazinye ụlọ, ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ụlọ ezumike na ebe obibi. Nakwa ụlọ mbikọ maka ndị na-emefu oke ego.
Ọ bụghị ebe ịnọ karịa ụbọchị anọ ma ọ bụ ise, mana ọ bara uru. Ije ije n'akụkụ osimiri ndị a sara mbara dị mma n'ihi na echiche dị mma ma na-asọba n'oké osimiri na nkume mgbe niile. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịbịaru nso, enwere obodo ole na ole ị ga - eji bọs ma ọ bụ ụgbọ ala ga - aga. Kpachara anya ka ị na-aga na Febụwarị, ọnwa ngagharingosi, maka na ọ na-ejuju.
Chuy na-bụ ókè-ala obodo dị ka ókè-ala Brazil. Ọ na-adịkarị ịhụ ndị Argentina nọ na Chuy ka ha na-agafe ókè iji zụọ ahịa. Obodo a dị n’akụkụ mmiri Osimiri Chuy ma aha ya bụ Guaraní. N’akụkụ ókè nke ala ahụ, a na-akpọ obodo Brazil ahụ Chuí. Yiri nnọọ! N'agbata obodo abụọ a na-aga ụzọ a na-akpọ Avenida Internacional na ọ bụ akwara ikuku nke ogige azụmahịa gbara gburugburu Ọrụ ma ọ bụ ụtụ isi.
Ulo a na-enye na Chuy na-etinye uche ulo mgbazinye ọkacha mma, ma ụfọdụ anaghị efu hotels ma ọ bụ ogige ụlọikwuu. Site na Chuy ị nwere ike ịga ọtụtụ ebe ndị dị n'ụsọ oké osimiri. Na Chuy mmanya ọ dị naanị kilomita iri na anọ site n’obodo ahụ ma bụrụ ebe ezumike nke oke osimiri. Osimiri sara mbara ma ka nwere nnukwu dunes. Ọnụ nke mmiri Chuy na-ekewa ya na Brazil na n'ihi nke ahụ, ọ bụ ọmarịcha ọmarịcha, mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
La Barra de Chuy nwere oghere abụọ maka ịma ụlọikwuu, ebe obibi dị mgbagwoju anya, ụlọ mgbazinye na họtel. Ọ bụ n'ezie ebe dị jụụ ma dịkwa nchebe ka ndị otu enyi na ezinụlọ na-ahọrọ ya. Na bọs ma ọ bụ tagzi ị nwere ike isi Chuy gawa Alvorada, ọmarịcha njem nlegharị anya ọzọ na njegharị nke mmasị Brazil na Uruguay nwere mmasị.
Nke a bụ oge ezumike ozo na Uruguay nke toro otutu oge ugbua. The coastline na-jupụtara na nnọọ ọmarịcha eroded nkume na iyi ka icho mma, dị ka jewels, osimiri. Na Osimiri Brava O nwere mmiri n’etiti akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -acha anụnụ anụnụ, nwere ọtụtụ ụfụfụ snowy, na Osimiri Mansa ọ bụ nke nnukwu mmiri na-echebe site na ifufe.
Ọ bụ ebe gastronomy ya dabere na azu na azu ya mere, ebe eat gara rie njiri mara mma. Osimiri ahụ na-ewepụta alga n'ụba, yabụ na onye na-ebido ebido bụ fritta mmiri, ka a na-eri ya ugboro ugboro, dịkwa ka efere ndị nwere ọla edo ma ọ bụ sọsọ osimiri. Dị ka ihe atụ obodo azu mmeghari ihe esemokwu na-adịgide adịgide n'oge ụfọdụ maka anya ndị njem nleta ọ bụ ọrụ dịịrị ya ịkwụsị ma lelee ya.
Otu n'ime nleta a tụrụ aro bụ Houselọ Oké Osimiri na-egosipụta skul whale ma ọ bụ the Ugwu Nwanyị Di Ya Nwụrụ ya na nkume ghostly. Na mgbede, ee ma ọ bụ ee, ị ga-agba ịnyịnya n'ụgbọ ịnyịnya.
N'ezie, ndị a abụghị naanị oge ezumike na Uruguay, mana ha so na ndị kachasị atụ aro na ndị a ma ama. Ọ bụrụ n ’ịgbanahụ oge oyi na mpaghara ugwu ma bata na ndịda, Uruguay na spa nwere ike na-eche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Uruguay » Summerfọdụ oge okpomọkụ na-aga Uruguay